कासी जेट्ली भन्नुहुन्छ : सफल काम गर्दा पनि किन ओली सरकारको आँखामा पर्दैनन कुलमान घिसिङ ? – Nepal Online Khabar
September 14, 2020 688
कासी जेट्ली ओमन : ओली देश विकास को यो’ग्य प्रधानमन्त्री हुँदै होइनन, उनी आफ’न्त को र भ्रष्टा’चार को तिब्र विकास को योग्य छन ! सं’दर्भ कुलमान घिसिङ को
Prevपदले होइन कामले रच्छ इतिहास, बिरालो शैलीमा छिरेका कुलमान बाघको रूपमा बाहिरिए…हेर्नुहोस् ।
Nextज्वाला संग्रौला भन्नुहुन्छ : कुलमानलाई पाखा लगाउने वि’रुद्ध आ’न्दोलन गरौँ, ग’द्दारहरुको सारा सम्पति ज’फत गरौँ…हेर्नुहोस् ।
एमसीसी बैठक पो बहिस्कार भएछ : भट्टराई
बालुवाटारमा नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठक, वामदेव पनि सहभागी